गर्भवती महिलालाई कोरोना सङ्क्रमण भए बच्चालाई के हुन्छ ? - DURBAR TIMES
HomeHealthगर्भवती महिलालाई कोरोना सङ्क्रमण भए बच्चालाई के हुन्छ ?
गर्भवती अवस्थामा महिलामा ‘हार्मोन’ परिवर्तन हुने भएकाले यस्तो अवस्थामा कोरोना सङ्क्रमित हुनु भनेको आमा र शिशु दुवैलाई खतरा हुन्छ । यस्तो बेला सामान्य लक्षणमात्र देखिएमा घरमा एकान्तवास बस्नुपर्छ तर अक्सिजनको मात्रा कम भएमा, श्वासप्रश्वास छिटो–छिटो भएमा, एक सयभन्दा बढी तापक्रम भएमा वा लगातार खोकी आएमा चिकित्सकसँग परामर्श लिने वा अस्पतालको सम्पर्कमा जानुपर्ने सुझाव डा। सुवेदीको छ ।
प्रसूति गृहमा दैनिक दुई÷तीनजना कोरोना सङ्क्रमित गर्भवती पुग्ने गरेका छन् । प्रसूतिका लागि चिकित्सकले दिएको समय कटेको अवस्था वा टाउको दुख्नेलगायत कुनै पनि असजिलो वा स्वास्थ्य समस्या भएमा तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्ने सुझाव डा. सुवेदीको छ ।
Previous article“म्याद सकिएको खोप लगाएको” हल्ला बारे स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गर्यो स्पष्टोक्ति
Next articleदाङमा इमरजेन्सीबाहेकका स्वास्थ्य सेवा बन्द गरिने